Cajaa'ib Sawirro Cajiib ah oo ICRE ah oo ay sameysay Studio Wershadda Ink | Martech Zone
Mar uun, waxaan doonayay inaan noqdo farshaxan garaaf ah. Haatan wax xoogaa shaqo ah ayaan qabtaa laakiin waxaa igu kalifaya dadka aan la kulmo ee warshadaha - Waxaan ka labalaabayaa inaan ka fikiro inaan waligey qaban karo sannadahan oo dhan ka dib. Dhowr sano oo farsamaynta qorista ah ayaa sidoo kale jajabisay hal-abuurkeygii - hadda waa wax ku saabsan isbarbar dhig. Sikastaba… markii aan dhex socday ICRE-ka Chicago, waxaan imid goobta Xalka Hanuunka waab.
Ku saabsan Hanuuninta
Laga soo bilaabo macaamil ganacsi sare, boggaga eCommerce oo si buuxda isku dhafan, ilaa codsiyada moobiilka, xalalka shirkadaha iyo adeegyada taageerada, Tilmaamtu waxay bixisaa faylalka faylalka adeegyada meertada nolosha si loo taageero baahiyahaaga.
Macaamiisha hagitaanku waxay u dhexeeyaan dukaamada magaca magacooda iyo soo saarayaasha wax soo saarka macaamiisha illaa daabacayaasha, bixiyeyaasha adeegga iyo ururada samafalka ah.
Hanuuninta ayaa qortay caawimada Studio Factory Ink si ay u sameyso duubitaanno muuqaal ah inta lagu gudajiray shirka. Waxaan kuu sheegayaa waxa - haddii aad rabto inaad dad tiro badan ku haysato hareerahaaga qolkaaga… kaliya ku dar Studio Waadhadhka Ink! Waa kuwan qaar ka mid ah shaqooyinka (ama haddii aad i weydiiso… qaybo farshaxan ah!) Oo laga soo qaado Alison:
Fursadaha Cusub ee Ganacsiga Dijital ah
Waa maxay duubista sawirada?
Ereyga duubista garaafka ah wuxuu macnaheedu noqon karaa waxyaabo badan oo kala duwan dad badan, laakiin asalka qeexitaanku waa mid fudud. Intii aan si firfircoon u dhagaysanaynay doodaada, waxaannu ku soo ururinaynaa ereyada lagu hadlayo qoraallo muuqaal iyo muuqaal ah. Muuqaaladan gacmeed lagu sawiray waxaa lagu sameeyay waqti-dhab ah, taas oo u oggolaanaysa waxyaabaha ku jira inay ubaxaan sheeko sheeko xambaarsan macluumaad. Duubista sawirada waxay kudareysaa cabir kale doodaada adoo abuuraya faham qoto dheer oo ku saabsan waxyaabaha kujira isla waqtigaasna ku dhiiri galinaysa qolka oo dhan awooda koox maskaxeed. Sida lagu qeexay Studio Warshad Ink.
Omni Cadayn Meheraddaada
Kobaca Ganacsiga B2B
Shakhsi ahaaneed ayaa Dakhli Wada
Tags: ganacsiga b2bganacsiga dhijitaalka ahecommerceisbeddelada ecommercedesign graphicduubista garaafkaduubista garaafkaistuudiyaha warshad khadnaqshadeynta muuqaalka tooska ahshakhsi ahaaneedwarshada khadaka
Sidee Habdhaqanka Dukaamaysiga iyo Diritaanka Onlineku uga socdaa 2015
9 Siyaabood oo loogu Kordhiyo Iibinta Wax Soo Saarka Suuqgeynta Emailka